Batshala ukudla okunempilo | News24
Batshala ukudla okunempilo
UNkk Agnes Mbambo, uNkk Sizani Mnembe, uNkk Elizebeth Vezi, uNkk Jabulile Nene noMnuz John Mdlalose engadini ese-Sub Five, KwaDabeka.IZITHOMBE: nosipho mkhize
INHLANGANO ezimele eyaziwa ngokuthi yi-Sakhokuhle Community Care Centre, yase-Sub Five, enamalungu ayi-12, inhloso yayo okungu kutshala izithelo eziyinhlobonhlobo ukuze belwe nendlala.
Okhulumela le nhlangano, uMnuz John Mdlalose uthe le nhlangano yasungulwa eminyakeni emine eyedlule. “ISakhokuhle Community Care Centre iqale yasebenza ingaka bhaliswa ngokusemthethweni, kodwa manje isemthethweni njenge nhlangano ezimele. Le nhlangano inama lungu ayi-12. Amalungu ale nhlangano abona ukuthi indawo esihlala kuyo ihlaselwe ubuphofu, abantu bayalamba ngenxa yokuthi abasebenzi, ngakho sabona kukuhle ukuthi sisungule le nhlangano siyizaguga,” kusho yena.
Uqhube wathi bacela indawo yokutshala eseduze nase siteshini samaphoyisa aKwaDabeka.
Uthe: “Sabona indawo engasetshenziswa, sakhuluma nabaphathi base maphoyiseni ukuthi sinecebo lokuqala ingadi ezolekelela amakhaya axakekile, ngenhlanhla bavuma ukuthi siyisebenzise le ndawo. Sibuye sitshale kwenye ingadi yesibili eSlovo ku-ward 19, sishintshanisa izinsuku zokusebenzela kuzo zombili izingadi,”kusho uMnuz Mdlalose.
Uthe batshala zonke izitshalo kubalwa i-spinach, uanyanisi, ikabishi, u-beetroot, amazambane, upelepele, u-brinjal, u-lettuce, i-cauliflower no-carrot.
Bathe lezi zithelo banikela ngazo emakhaya axakekekile bese ezinye bezidayise ukuze bandise isikhwama semali.
Uthe: “Imindeni exakekile iyakwazi ukuthola ukudla ngezithelo zethu, ezinye sizihambisa kwi nkulisa ukuthi bephekele izingane, okunye sikuyise emakhaya ethu ukuze nathi sidle nemindeni yethu, ezinye izitshalo siyazi dayise. Lomsebenzi esiwenzayo uyayixosha indlala, yize noma sesigugile kodwa siyaqikelela ukuthi umsebenzi uyaqhubeka ukuze kungahlupheki umphakathi nemindeni yethu,” kusho uMnuz Mdlalose.
Uqhube wathi imali abayitholayo ekudayiseni izitshalo bayisebenzisela ukuthenga imbewu nezithombo enye bayifake ebhange.
Uthe: “Le nhlangano isikhule ngendlela eyisimanga, ngoba baningi abantu esibasizile. Sikhuluma nje sisezinhlelweni zokuxoxisana nekhaya labadala iMuthande Society for the Aged, ukuze sibaxhase ngezithelo,” kusho yena.
Uthe le nhlangano idinga uxhaso ngamathuluzi okusebenza.
“Asinawo amathuluzi enele okusebenza kubalwa amageja amafosholo namabhala. Okunye okusemqoka esikudingayo i-container esizokwazi ukuhlala kuyo uma linetha izulu, ngoba sibanenkinga yokuthi sigoduke uma nje kwaqala imvula. Sidinga ama bhuzu asengadini kanye nezihlalo ngoba sesibadala siphathwa ama qolo kumele sibuye siphumule sihlale phansi,” kusho uMnuz Mdlalose.
Uma kukhona onothando lokuxhasa iSakhokuhle Community Care Centre angashayela uMnuz John Mdlalose enombolweni ethi: 072 113 0458 noma uNkk Elizbeth Vezi enombolweni ethi: 071 269 0483 noma uNkk Agnes Mbambo enombolweni ethi: 073 792 4155